क्रिश्चियन सब्बाथ - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > ईसाई सब्बाथ
इसाई सब्बथ भनेको येशू ख्रीष्टको जीवन हो जसमा हरेक विश्वासीले साँचो आराम पाउँछ। दस आज्ञामा इस्रायललाई दिइएको साप्ताहिक सातौं दिनको शबाथ एक छाया थियो जुन हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको वास्तविक यथार्थतालाई औंल्याउँछ। (हिब्रू:: -4,3.8-१०; मत्ती ११: २ 10--11,28०; प्रस्थान २०: -30-११; कलस्सी २: १-2-१-20,8)
ख्रीष्टमा मुक्ति मनाउनुहोस्
आराधना भनेको हाम्रोलागि भगवानले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका दयालु कार्यहरूको उत्तर हो। इस्रायलीहरूको लागि, प्रस्थान, मिस्रबाट बाहिर निस्केको अनुभव, पूजाको केन्द्रमा रहेको थियो - परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति के गर्नुभयो। इसाईहरूका लागि, सुसमाचार उपासनाको केन्द्रमा छ - भगवानले सबै विश्वासीहरूका लागि के गर्नुभयो। इसाई उपासनामा हामी सबै मानिसहरूलाई मुक्ति र मुक्तिका लागि येशू ख्रीष्टको जीवन, मृत्यु र बौरिउठाइमा भाग लिन्छौं र साझेदारी गर्दछौं।
इस्रायललाई दिइने आराधनाको विधि विशेष रूपमा उनीहरूको लागि थियो। परमेश्वरले मोशामार्फत इस्राएलीहरूलाई आराधना गर्ने तरिका प्रदान गर्नुभयो जसले इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा ल्याउँदा परमेश्वरले उनीहरूलाई गर्नुभएका सबै कामहरूको लागि मनाउन र उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्थ्यो।
ईसाई पूजा भगवान संग ईजरायल को पुरानो नियम को अनुभव मा आधारित उपदेशहरु को आवश्यकता छैन, बरु यो सुसमाचार को प्रतिक्रिया। अनुरूप, हामी भन्न सक्छौं कि सुसमाचार को "नयाँ वाइन" "नयाँ बोतलहरु" (मत्ती:: १)) मा खन्याउनु पर्छ। पुरानो करार को "पुरानो नली" सुसमाचार को नयाँ शराब प्राप्त गर्न को लागी डिजाइन गरीएको थिएन (हिब्रू 9,17: 12,18-24)।
इस्रायलीहरूको उपासना इस्रायलको लागि थियो। यो ख्रीष्टको आगमन सम्म रह्यो। त्यसबेलादेखि परमेश्वरका जनहरूले नयाँ तरिकाले उनीहरूको उपासनाको अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै नयाँ सामग्रीलाई जवाफ दिएका छन् - जुन येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले गर्नुभएका अनौंठो काम हो। इसाई आराधनाको उद्देश्य येशू ख्रीष्टको शरीर र रगतमा दोहोर्‍याउनु र भाग लिनु हो। मुख्य कम्पोनेन्टहरू:
प्रभु भोज को उत्सव, पनि Eucharist (वा धन्यवाद) र कम्युनियन भनिन्छ, हामी ख्रीष्ट द्वारा आज्ञा गरिएको थियो।
धर्मशास्त्र पढ्ने: हामी परमेश्वरको प्रेम र उहाँका प्रतिज्ञाहरूको लेखाजोलो समीक्षा गर्छौं र विशेष गरी मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको प्रतिज्ञाले हामीलाई परमेश्वरको वचनमा खुवाउँदछ।
प्रार्थना र गीतहरू: हामी विश्वाससाथ ईश्वरलाई हाम्रा प्रार्थनाहरू सम्बोधन गर्दछौं, नम्र भई हाम्रा पापहरूलाई पश्चाताप गर्दछौं, र सम्मान र आनन्दसाथ, आभारी श्रद्धासहित उहाँको प्रशंसा गर्दछौं।
इसाई पूजा मुख्यतया सामग्री र अर्थमा आधारित छ र औपचारिक वा अस्थायी मापदण्डमा होइन। त्यसकारण इसाई उपासनालाई हप्ताको कुनै खास दिन वा कुनै खास मौसममा बाँधिएको छैन। इसाईहरूले पनि कुनै विशेष दिन वा मौसमको आवश्यक पर्दैन। तर इसाईहरूले येशूको जीवन र कामका महत्त्वपूर्ण चरणहरू मनाउन विशेष asonsतुहरू रोज्न सक्छन्।
त्यस्तै गरी, इसाईहरू हप्तामा एक दिन उनीहरूको साझा पूजाको लागि: उनीहरू परमेश्वरको सम्मान गर्न ख्रीष्टको शरीरको रूपमा भेला हुन्छन्। धेरै जसो इसाईहरू पूजाको लागि आइतवार छनौट गर्दछन्, अरूले शनिबार छनौट गर्छन्, र फेरि केहि मानिसहरू भेला हुन्छन् - उदाहरणका लागि बुधबार साँझ।
सेभेन्थ-डे एड्भेन्टिस्टहरूको शिक्षाको सामान्य धारणा यो हो कि यदि इसाईहरूले पाप गर्न सक्छन् भने उनीहरूले आइतवारलाई नियमित पूजाको दिनको रूपमा रोजे। तर बाइबलमा यसको लागि कुनै समर्थन छैन।
आइतवार हुने घटनाहरू सेभेन्थ-डे एड्भेन्टिस्टहरू अचम्म मान्न सक्दछन्, तर सुसमाचारका पुस्तकहरूले स्पष्ट रूपमा आइतवार हुने प्रमुख घटनाहरूको रिपोर्ट गर्दछ। हामी यसबारे अझ विस्तृत रूपमा हेर्नेछौं: मसीहीहरू आइतवारको सेवा पालन गर्न बाध्य छैनन्, तर उपासना सेवाको लागि आइतवार रोज्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन।
यूहन्नाको सुसमाचार रिपोर्ट गर्दछ कि येशूका चेलाहरु येशूलाई क्रूसमा टाँगिए पछि पहिलो आइतबार भेटे र येशू उनीहरु लाई देखा पर्नुभयो (यूहन्ना २०: १)। सबै चार सुसमाचारहरुमा लगातार रिपोर्ट छ कि येशूको मृत्यु बाट पुनरुत्थान आइतबार चाँडै पत्ता लगाइएको थियो (मत्ती २.20,1.१; मार्क १.28,1.२; लूका २४.१; जोन २०.१)।
यी चारै जना प्रचारकहरूले यो घटना उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यी घटनाहरू एउटा निश्चित समय अर्थात् आइतबारमा भएको थियो। तिनीहरू यस्तो विस्तृत बिना गर्न सक्थे, तर तिनीहरूले गरेनन्। सुसमाचारका पुस्तकहरूले देखाउँदछ कि येशू आफूलाई आइतबार उठाइएको मसीहको रूपमा प्रकट गर्नुभयो - पहिलो बिहान, त्यसपछि दिउँसो र अन्तमा साँझ। बौरिउठ्नुभएका येशूका यी आइतवारका दृश्यहरूलाई हेर्दा, प्रचारकहरू कुनै प्रकारले चिन्तित वा डराएनन्; बरु, उनीहरूले यो स्पष्ट पार्न चाहन्थे कि यी सबै घटनाहरू हप्ताको पहिलो दिनमा भनेका थिए।
Emmaus गर्न तरिका
जो कोहि पनी अझै पनी पुनरुत्थान को दिन मा शंका थियो लूका को सुसमाचार मा दुई "Emmaus चेलाहरु" को अचम्मको खाता पढ्नु पर्छ। येशूले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कि उहाँ "तेस्रो दिन" मरेर बौरी उठ्नुहुनेछ (लूका .9,22 .२२; १.18,33.३३; २४.)।
लूकाले स्पष्ट रूपमा रिपोर्ट गरे कि आइतबार - जुन दिन महिलाहरु येशूको खाली चिहान पत्ता लगाए - वास्तवमा "तेस्रो दिन" थियो। उनले स्पष्ट रूपमा औंल्याए कि आइतबार बिहान महिलाहरु येशू को पुनरुत्थान को रेकर्ड (लूका २४: १--24,1), कि चेलाहरु "उही दिन" (लूका २४:१३) एम्माउस गए र यो "तेस्रो दिन" थियो "(लूका २४:२१) त्यो दिन थियो जसमा येशूले भन्नुभयो कि उहाँ मरेकाहरुबाट बौरी उठ्नु पर्छ (लूका २४:))।
हामी केहि महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू कल्पना गर्न चाहन्छौं जुन प्रचारकहरूले हामीलाई येशूको क्रूसमा टाढाबाट पहिलो आइतवारको बारेमा बताउँदछन्:
येशू मरेकाबाट जीवित हुनुभयो (लूका २४: १--24,1, १३:२१)।
जब येशू "रोटी तोड्नुभयो" (लूका २४: ३०-३१, ३४-३५) लाई चिनियो।
चेलाहरु भेटिए र येशू उनीहरुकहाँ आउनुभयो (लूका २४.१५, ३ 24,15; यूहन्ना २०.१, १)। जोन रिपोर्ट गर्दछन् कि चेलाहरु पनि क्रूस मा झुण्डिए पछि दोस्रो आइतबार मा भेटे र कि येशू फेरि "उनीहरु को बीच मा कदम" (जोन २०:२))।
प्रारम्भिक चर्च मा
लूकाले प्रेरित २०: in मा रिपोर्ट गरे अनुसार, पावल ट्रोआसका चर्चका सदस्यहरुलाई प्रचार गरे जो आइतबार "रोटी भाँच्न" भेला भएका थिए। १ कोरिन्थी १:: २ मा, पावलले कोरिन्थको चर्च र गलाटियाका चर्चहरु (१:: १) लाई हरेक आइतबार यरूशलेमको भोकाएको चर्चको लागी दान गर्न आग्रह गरे।
पॉल भन्छन चर्च आइतबार भेट्नु पर्छ। तर उनको अनुरोधले सुझाव दिन्छ कि आइतबारको भेला असामान्य थिएन। उहाँले साप्ताहिक दान को कारण बताउनुहुन्छ "ताकि संग्रह मात्र जब म आउँछ" (१ कोरिन्थी १:: २)। यदि पैरिशियनहरु हरेक हप्ता एक बैठक मा आफ्नो दान नगरेको तर पैसा घर मा अलग राखेको थियो, एक संग्रह अझै पनी प्रेरित पावल आइपुगेको थियो।
यी खण्डहरु यति स्वाभाविक रूप मा पढ्छन् कि हामीलाई थाहा छ कि ईसाईहरु को लागी आइतबार भेट्न को लागी यो असामान्य थिएन, र उनीहरु को लागी उनीहरुको आइतवार को बैठक मा "रोटी तोड्ने" को लागी असामान्य थिएन (एक वाक्यांश जुन पॉल प्रभु संग प्रयोग गरीयो। भोज जोड्छ; १ कोरिन्थी १०: १-1-१10,16 हेर्नुहोस्)।
त्यसकारण हामी देख्छौं कि प्रेरित नयाँ नियमका प्रचारकहरू हामीलाई थाहा छ कि येशू आइतवार फेरि उठ्नुभयो। कम्तिमा पनि विश्वासीहरू आइतवार रोटी तोड्न भेला भएमा उनीहरूलाई कुनै चिन्ता थिएन। इसाईहरुलाई आइतवार सेवाको लागि भेला हुन विशेष निर्देशन गरिएको छैन, तर यी उदाहरणले देखाउँदछ कि यस बारेमा कुनै अलिकता पनि हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।
माथि उल्लेख गरिएझैं, इसाईहरू आइतवारलाई ख्रीष्टको शरीरको रूपमा परमेश्वरसँगको उनीहरूको सम्वन्ध मनाउन भेला हुनका लागि पनी मान्य कारणहरू छन्। के मसीहीहरूले आइतवारलाई मण्डलीको दिनको रूपमा छान्नु पर्छ? होइन इसाई विश्वास केहि दिनहरूमा आधारित हुँदैन, तर परमेश्वर र उनको छोरा येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासमा आधारित छ।
यो गलत हुनेछ यदि तपाईं केवल अनिवार्य बिदाको एक समूह अर्कोसँग बदल्न चाहानुहुन्छ। इसाई विश्वास र आराधना तोकिएको दिनको बारेमा होइन, तर उहाँलाई हाम्रा पिता र हाम्रा प्रभु र उद्धारक येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने र माया गर्ने बारेमा छ।
जब हामी कुन दिन अरू विश्वासीहरूसँग आराधनाको लागि भेला हुन निर्णय गर्दछौं, हामीले सही कारणले निर्णय गर्नुपर्दछ। येशूको कल "ले, खाऊ; त्यो मेरो शरीर हो "र" यो सबै पिउनुहोस् "कुनै खास दिनमा बाँधिएको छैन। यद्यपि, अन्यजातिका इसाईहरूले प्रारम्भिक चर्चको सुरूदेखि नै आइतवारलाई ख्रीष्टको संगतिमा भेला हुने परम्परा रहेको छ, किनकि आइतवार त्यो दिन थियो जसमा येशूले आफूलाई मृत्युबाट बौरी उठेको देखाउनुभयो।
सब्बथ व्यवस्था र यसको साथमा सम्पूर्ण मोशाको व्यवस्थाको अन्त, येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानसँगै भयो। यसमा टाँसिरहनु वा यसलाई आइतबार शबाथको रूपमा पुन: प्रयोग गर्नुको अर्थ भनेको येशू ख्रीष्टको बारेमा गरिएको परमेश्वरले गर्नुभएको अभिव्यक्तिलाई कमजोर पार्नु हो, जो उहाँका सबै प्रतिज्ञाहरूको पूर्ति हो।
ईसाईहरू शबाथ पालन गरून् वा उनीहरूलाई मोशाको व्यवस्था पालन गर्न बाध्य गर्दछन् भन्ने विश्वासको अर्थ यो हो कि हामी ख्रीष्टियनहरू परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा दिन चाहेको आनन्द पूर्ण रूपमा अनुभव गर्दैनौं। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामीले उहाँको मुक्तिको काममाथि भरोसा गरून् र उहाँमा मात्र शान्ति र सान्त्वना पाउनुपर्दछ। हाम्रो उद्धार र जीवन उहाँको अनुग्रहमा छन्।
हामी कहिलेकाँही एक पत्र पाउँछौं जसमा लेखकले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् कि हामीले साप्ताहिक शबाथहरू इसाईहरूको लागि परमेश्वरको पवित्र दिन हो भन्ने दृष्टिकोणमा प्रश्न सोध्छन्। तिनीहरूले घोषणा गरे कि जे भए पनि कसैले उनीहरूलाई जे भन्यो, तिनीहरूले "मान्छे भन्दा भगवान" लाई मान्ने छन्।
परमेश्वरको इच्छा हो भनेर विश्वास गरीरहेको कामलाई स्वीकार्नुपर्दछ; के वास्तवमा भ्रामक छ त्यो भगवानले हामीबाट साँच्चिकै आशा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनु भनेको साप्ताहिक शबाथलाई पवित्र बनाउनु हो भन्ने कुरालाई शब्बतारियनहरूको दृढ विश्वासले स्पष्ट पार्छ कि लापरवाह इसाईहरू बीच साब्बाटारियालीहरूले कस्तो भ्रम र त्रुटि खडा गरे।
एकातिर, सब्बटेरियन शिक्षाले परमेश्वरको आज्ञापालनको अर्थ के हो भनेर बाइबलीय समझ घोषणा गर्दछ र अर्कोतर्फ यसले आज्ञाकारिताको यो समझलाई इमान्दारिताको वैधता निर्णय गर्ने मापदण्ड बनाउँछ। यसको नतीजा भनेको एक मुठभेडको मानसिकता - "हामी अरूको बिरूद्धमा" विकसित भएका छौं, परमेश्वर को समझ हुनुहुन्छ जसले ख्रीष्टको शरीरमा विभाजन ल्याउँछ किनकि कुनै व्यक्तिले नयाँ नियमका अनुसार यो आदेशलाई पालन गर्नै पर्छ भन्ने सोच्छ।
साप्ताहिक सब्बाथ को वफादार पालन भगवान को आज्ञाकारिता को एक प्रश्न हैन किनकि भगवान ईसाईहरु लाई साप्ताहिक विश्राम दिन को आवश्यकता छैन। भगवानले हामीलाई उहाँलाई माया गर्न भन्नुहुन्छ, र भगवान को लागी हाम्रो प्रेम साप्ताहिक सब्बाथ अवलोकन गरेर निर्धारित गरीएको छैन। यो येशू ख्रीष्ट मा हाम्रो विश्वास र हाम्रा सँगी मानिसहरु को लागी हाम्रो प्रेम (१ यूहन्ना ३: २१-२४; ४: १ -1 -२१) द्वारा निर्धारित हुन्छ। त्यहाँ छ, बाइबल भन्छ, एउटा नयाँ करार र नयाँ कानून (हिब्रू ::१२; ::१३;:: १५)।
इसाई शिक्षकहरूले साप्ताहिक सब्बथलाई इसाई विश्वासको वैधताको लागि गजको दूरीको रूपमा प्रयोग गर्नु गलत हो। सब्बथको व्यवस्था इसाईहरूका लागि बाध्य छ भन्ने शिक्षाले विनाशकारी कानुनी न्यायको साथमा इसाई अन्तस्करणलाई बोझ दिन्छ, सत्य र सुसमाचारको शक्तिलाई अस्पष्ट बनाउँछ र ख्रीष्टको शरीरमा विभाजन ल्याउँछ।
बाइबल भन्छ परमेश्वरले मानिसहरु लाई विश्वास गर्न र सुसमाचार लाई माया गर्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ (यूहन्ना ::४०; १ यूहन्ना ३: २१-२४; ४:२१; ५: २)। सबैभन्दा ठूलो खुशी छ कि मानिसहरु अनुभव गर्न सक्छन् कि उनीहरु जान्दछन् र उनीहरुका प्रभुलाई माया गर्छन् (जोन १.6,40.३), र यो प्रेम परिभाषित वा हप्ताको एक विशेष दिन अवलोकन गरेर प्रचारित छैन।
क्रिश्चियन जीवन मुक्तिदाताको आनन्द मा, ईश्वरीय विश्राम को जीवन हो, एक जीवन जसमा जीवन को हरेक भाग भगवान को लागी समर्पित छ र हरेक गतिविधि आत्मसमर्पण को एक कार्य हो। "साँचो" ईसाई धर्म को एक परिभाषित तत्व को रूप मा सब्बाथ को अवलोकन को स्थापना एक को आनन्द र शक्ति को धेरै मिस गर्न को लागी ख्रीष्ट आउनुभएको छ कि र उहाँमा भगवान सुसमाचार नयाँ करार मा विश्वास गर्ने सबै संग एक हुनुहुन्छ (मत्ती २::२;; हेब्र
9,15), हुर्काइयो (रोमी १:१1,16; १ यूहन्ना ५: १)।
साप्ताहिक विश्रामदिन एक छाया थियो - एक संकेत - वास्तविकता को कि अझै आउन को लागी (कलस्सी २: १-2,16-१17)। यो संकेत सदाको लागी आवश्यक को रूप मा राख्नुको अर्थ सत्य लाई इन्कार गर्नु हो कि यो वास्तविकता पहिले नै अवस्थित छ र उपलब्ध छ। एक आफैंलाई के साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ को बारे मा अविभाजित आनन्द अनुभव गर्ने क्षमता बाट वञ्चित गर्दछ।
यो तपाईको व्यस्तताको घोषणामा झुण्ड्याउन र विवाह भैसकेपछि यसको आनन्द लिने जस्तो हो। बरु, यो समय हो पार्टनरलाई प्राथमिकता दिन र सment्लग्नतालाई पृष्ठभूमिमा एक सुखद मेमोरीको रूपमा दिनुहोस्।
स्थान र समय अब ​​भगवान को मानिसहरु को लागी पूजा सेवा को केन्द्रबिन्दु हो। साँचो उपासना, येशूले भन्नुभयो, आत्मा र सत्य मा हुनुहुन्छ (यूहन्ना ४: २१-२4,21)। मुटु आत्मासंग सम्बन्धित छ। येशू सत्य हुनुहुन्छ।
जब येशूलाई सोधिएको थियो, "परमेश्वरको काम गर्न के गर्नु पर्छ?" उसले जवाफ दियो, "यो भगवानको काम हो, कि तिमीले उहाँलाई पठाउनुभएकोमा विश्वास गर्न सक्छौ" (यूहन्ना:: २-6,28-२29)। यसैले ईसाई पूजा मुख्यतः येशू ख्रीष्ट को बारे मा छ - भगवान को अनन्त पुत्र को रूप मा उनको पहिचान को बारे मा र प्रभु, मुक्तिदाता र शिक्षक को रूप मा उनको काम को बारे मा।
भगवान बढी खुशी हुनुहुन्छ?
जसले विश्‍वास गर्दछ कि सब्बथको कानूनको पालना गर्नु नै मापदण्ड हो जुन हाम्रो छुटकारा वा दण्डको अन्तिम न्यायमा निर्धारण गर्दछ दुबैलाई बुझ्दछन् - पाप र ईश्वरको अनुग्रह। यदि सब्बथ सन्तहरू केवल मुक्ति पाउनलाई मात्र छन् भने शबाथ भनेको त्यो उपाय हो जसद्वारा न्याय गरिन्छ, न त परमेश्वरको पुत्र, जो मर्नुभयो र हाम्रो मुक्तिको लागि मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो।
सब्बटेरियनहरू विश्वास गर्छन् कि जसले विश्राम दिनलाई पवित्र पार्नुहुन्छ उहाँ भन्दा परमेश्वर बढी प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर यो तर्क बाइबलबाट आएको होइन। बाइबलले सिकाउँछ कि शबाथको व्यवस्था, मोशाको सम्पूर्ण व्यवस्था जस्तै, येशू ख्रीष्टमा माथि उठाइएको छ र माथि राखिएको छ।
तसर्थ, यदि हामीले शबाथ पालन गर्छौं भने, यसको मतलब परमेश्वर "ठूलो आनन्द" हुनेछैन। विश्राम दिन इसाईहरूलाई दिइएन। सब्बथ ईश्वरशास्त्रको विनाशकारी तत्त्व भनेको यो हो कि सब्बटारियनहरू एक मात्र साँचो र विश्वास गर्ने इसाईहरू हुन्, जसको मतलब शबाथको दिन नथपेसम्म येशूको रगतले मानिसहरू मुक्तिको लागि पर्याप्त हुँदैन।
बाइबल पाठ को धेरै महत्वपूर्ण परिच्छेद मा यस्तो गलत सिद्धान्त को विरोधाभास छ: हामी भगवान को अनुग्रह द्वारा छुटकारा पाएका छौं, केवल ख्रीष्ट को रगत मा विश्वास को माध्यम बाट र कुनै प्रकार को काम बिना (एफिसी २: -2,8-१०; रोमी ३:२१) -२२; ४, ४--10; २ तिमोथी १:;; तीतस ३: ४--3,21)। यी स्पष्ट कथनहरु कि ख्रीष्ट मात्र हो, र कानून होइन, हाम्रो मुक्ति को लागी निर्णायक छ विश्रामदिन को सिद्धान्त संग बिबादमा छ कि जो मानिसहरु जो सब्बाथ को पालन गर्दैनन् मुक्तिको अनुभव गर्न सक्दैनन्।
औसत शबाथ मान्छेले विश्वास गर्छ कि उसले शबाथ दिनलाई पालन नगर्ने मानिस भन्दा बढी ईश्वरभक्ति हो। अघिल्लो WKG प्रकाशनहरूबाट निम्न कथनहरू हेरौं:
"तर मात्र जो सब्बाथ को पालन गर्न को लागी भगवान को आज्ञा को पालन गर्न को लागी अन्ततः भगवान को राज्य को गौरवशाली 'आराम' मा प्रवेश र अनन्त आध्यात्मिक जीवन को उपहार प्राप्त हुनेछ" (राजदूत कलेज बाइबल पत्राचार पाठ्यक्रम, पाठ २ 27, १ 58 of४, २ 1964) 1967)।
"जो सब्बाथ पालन गर्दैनन् उनीहरु ईश्वरीय विश्राम दिन को 'चिन्ह' सहन गर्दैनन्, जसको साथमा परमेश्वरका मानिसहरु लाई चिन्ह लगाइएको छ, र फलस्वरूप ईश्वरको जन्म हुनेछैन जब ख्रीष्ट आउनुहुन्छ!" (ibid, १२)।
यी उद्धरणहरूले देखाउँदछ कि सब्बथ पालनलाई केवल ईश्वरले दिनुहुन्छ भनेर मानिन्थ्यो, तर यो पनि विश्वास गरीन्थ्यो कि विश्रामदिनको पवित्र बिना कोही कोही पनि बाँच्न सक्दैन।
सेभेन्थ-डे एड्भेन्टिस्ट साहित्यको निम्न उद्धरण:
"यो eschatological बहस को सन्दर्भ मा, आइतवार सेवा अन्ततः एक विशिष्ट सुविधा हो, यहाँ जनावर को प्रतीक हो। शैतानले आइतबार आफ्नो शक्तिको प्रतीक बनाएको छ, जबकि विश्रामदिन भगवान प्रति वफादारी को महान परीक्षा हुनेछ। यो विवाद ईसाई धर्मलाई दुई शिविरहरुमा विभाजित गर्दछ र भगवान को मानिसहरु को लागी विवादित अन्त समय निर्धारण गर्दछ Don (डन न्यूफेल्ड, सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट इन्साइक्लोपीडिया, दोस्रो संशोधन, भोल्युम ३)। उद्धरणले सेभेन्थ-डे एडभेन्टिस्ट विश्वासलाई बुझाउँछ कि विश्राम दिन राख्ने निर्णय गर्ने मापदण्ड हो कि को साँच्चै भगवान मा विश्वास गर्दछन् र को गर्दैनन्, एक अवधारणा जुन येशू र प्रेरितहरुको शिक्षा को एक आधारभूत गलतफहमी बाट उत्पन्न हुन्छ, एक अवधारणा हो कि बढावा दिन्छ। आध्यात्मिक श्रेष्ठताको दृष्टिकोण।
सब्बटेरियन ईश्वरशास्त्रले येशू ख्रीष्टमा भएको परमेश्वरको अनुग्रह र बाइबलको स्पष्ट सन्देशको बिरूद्ध गर्दछ। शबाथ व्यवस्था लगायतका मोशालाई दिइएको व्यवस्था, इसाई चर्चको लागि नभई इस्रायलका लागि थियो। यद्यपि इसाईहरूले हप्ताको प्रत्येक दिन परमेश्वरको आराधना गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुपर्दछ, हामीले यो विश्वास गर्न गल्ती गर्नु हुँदैन कि बाइबलीय कारण छ कि कुनै पनि दिन सम्मेलनको दिनको रूपमा छनौट गर्नुपर्दछ।
हामी निम्न सबैलाई संक्षेपमा भन्न सक्छौं:
सातौं दिन शबाथहरू इसाईहरूलाई बाध्य पार्दछन् भनेर दावी गर्नु बाइबलीय शिक्षाको विपरीत हो।
यो सब्बथलाई पवित्र बनाउने मानिसहरूसँग परमेश्वर बढी प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर दाबी गर्नु बाइबलको शिक्षाको विपरित हो। सातौं दिन वा आइतबार शबाथ दिनमा नगर्नुहोस्।
चर्चको समुदायको लागि एक दिन अर्को भन्दा पवित्र वा बढी ईश्वरीय हो भनेर दाबी गर्नु बाइबलीय शिक्षाको विपरित हो।
त्यहाँ एउटा आइतवारको दिनमा सुसमाचारको केन्द्रीय घटना रहेको छ, र त्यो दिनको लागि इसाई परम्पराको पूजाको लागि भेला हुने आधार हो।
हामीलाई मुक्ति दिन हामीहरू मध्येको रूपमा आएका परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान हाम्रो विश्वासको आधार हो। त्यसकारण, आइतवारको पूजा भनेको सुसमाचारमा हाम्रो विश्वासको प्रतिबिम्ब हो। यद्यपि आइतवारको सामुदायिक पूजा आवाश्यक हुँदैन, न त आइतवारको पूजाले इसाईहरूलाई हप्ताको कुनै पनि दिनको सम्मेलन भन्दा पवित्र बनाउँदछ वा भगवान्लाई बढी माया गर्नुहुन्छ।
इसाईहरूमा सब्बथलाई बाध्य पार्नु भन्ने शिक्षाले आत्मिक क्षति पुर्‍याउँछ किनभने त्यस्ता शिक्षा धर्मशास्त्रको विपरित छ र यसले ख्रीष्टको शरीरमा एकता र प्रेमलाई खतरामा पार्दछ।
इसाईहरू शनिबार वा आइतवार भेला हुनु पर्छ भनेर विश्वास गर्नु र सिकाउनु आध्यात्मिक तवरमा हानिकारक छ किनभने यस्तो शिक्षाले छुटकारा पाउनलाई छुटकारा पाउन सक्ने कानुनी अवरोधको रूपमा उपासना दिनलाई स्थापना गर्छ।
एक अन्तिम विचार
येशूका अनुयायीहरू भएको नाताले हामीले परमेश्वरसामु आफ्नो अन्तस्करणअनुरूप छनौट गर्दा एक अर्काको न्याय गर्न सिक्नु हुँदैन। र हामी आफैंले निर्णयको पछाडि कारणहरु संग इमानदार हुनु पर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले विश्वासीहरूलाई उहाँको ईश्वरीय विश्राममा ल्याउनुभयो, उहाँसँग शान्तपूर्वक परमेश्वरको पूर्ण अनुग्रहमा। येशूको आज्ञा अनुसार हामी सबैले एक अर्काप्रतिको प्रेम बढाउँदै गयो।